Namboarina ho herinaratra ambany jiro LED Cup Cup Aluminium Die Casting Products - Minghe Casting
Masinina famonoana fanerena an-tseranana feno mitsangana feno
8h fotoana fandefasana
Fanontaniana ankehitriny Mifandraisa aminay
Fanontaniana momba ny vokatra
Vokatra fanariana Minghe Die any Shina
Orinasa miorina amin'ny Minghe miaraka amin'ny famokarana any Shina. ISO 9001: 9002, ISO 9001: 2000 & ISO / TS 16949 mpanamboatra voamarina & mpaninjara famoahana ho faty ao anatin'izany ny vokatra avo lenta namboarina tamin'ny Jiro LED Jiro Cup Die Casting Products. Ny casting casting dia misy amin'ny aliminioma, zinc & magnesium. Indostria natolotra dia ahitana fiara mandeha amin'ny maotera, fitaovana, fifandraisana, motera elektrika ary haingon-trano. Ny fahaiza-manao dia misy ny fanariana aluminium maty, fanariana fampiasam-bola, fanariana fasika vy, fanamafisam-by, fanitsiana vy ary fananganana, famolahana tsindrona plastika ary fitrandrahana aluminium. Ny serivisy dia misy ny fampivoarana ny maodelin'ny CAD, ny famakafakana ny adin-tsaina, ny fanandramana laboratoara mekanika & simika & serivisy prototyping.
Ny fahaiza-manao mialoha ny famokarana
Ny bobongolo dia voahodina tsy miankina, tsy misy tombony fanampiny, vidiny antonony, tsingerina fohy, ary andramana amin'ny 20 andro haingana indrindra, ary ny orinasa taloha an'ny orinasa anay tapany mahafaty ary ny vokatra tsy mendrika dia averina ary atakalo tsy misy fepetra tsy misy antony.
1. Famolavolana sary
DFM dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra arahin'ireo injeniera Minghe hanatsarana ny fahaizan'ny casting rehefa mitazona ny asany. Minghe dia manana ekipa injeniera matihanina mihoatra ny folo izay hanome sosokevitra mahomby amin'ny firafitry ny fitaovana ary hahita fifandanjana eo amin'ny famolavolana, ny vidiny ary ny fahombiazan'ny ampahany.
2. Famolavolana bobongolo
Ny dingan'ny bobongolo dia manahaka ny fizotran'ny famenoana sy ny fanamafisana, maminavina ireo lesoka izay hiseho amin'ny famoahana ho faty, ary maminavina ny metaly microscopic sy ny mekanika ary ny tanjaky ny tsimatra ejector bobongolo. Manatsara ny famolavolana mpihazakazaka sy vavahady, manatsara ny fari-pandrefesana amin'ny famokarana, mampihena ny vidin'ny R&D sy ny famokarana ary manatsara ny kalitaon'ny vokatra.
3. Famokarana bobongolo
Slider multi-Minghe famokarana bobongolo Ny teknolojia dia mamela antsika hametraka ny firafitry ny ampahany amin'ny bobongolo lehibe indrindra rehefa manao ny bobongolo, ary ny ampahany dia niforona indray mandeha, mampihena ny vidin'ny famokarana singa maro sy ny fivorian'ny fiangonana ary ny fanodinana faharoa.
Minghe dia iray amin'ireo orinasa vitsy manana fahaizana manitatra ny elanelam-pandefasana, miaraka amina milina fanariana maty 58-3000 taonina isan-taonina. Izy io dia afaka mamokatra faritra milanja 5g-35kg. Ny lafaoro tsy miankina an'ny milina fanariana maty tsirairay dia ahafahantsika manome aliminioma, zinc, manezioma ary alloys isan-karazany hihaona amin'ny filan'ny mpanjifa tsy manam-paharoa.
5. Fahaizana milina Cnc
Minghe dia manana traikefa sy matotra machining cnc ekipa, foibe fanodinana hafarana maherin'ny folo, ary ny marika fanodinana azy manokana PTJ Shop dia iray amin'ireo mpanamboatra fanodinana kely sy salantsalany folo any Shina. Manome marim-pototra azo antoka amin'ny fanodinana izy io. Ny fandeferana farafaharatsiny dia fehezin'ny 0.22mm hamaly ny filan'ny ampahany. Fepetran'ny fivoriambe amin'ny lafiny client.
6. Fahaizana amin'ny fitsaboana ambonin'ny tany
Minghe dia afaka mamita ny fitsaboana ara-batana sy ny fitsaboana famaohana vovoka toy ny fipoahana bala, fasika tsara, fasika maditra sns. Mandritra izany fotoana izany dia niditra an-tsehatra lalina tamin'ny laharam-pamokarana eo an-toerana i Minghe nandritra ny 30 taona mahery, nanambatra stratejika ireo mpamatsy fitsaboana etona am-polony, ary amin'ny alàlan'ny fitantanana ireo rojom-bidy sarotra, hanomezana ny mpanjifa fitsaboana amin'ny tany toa ny famafazana plastika, sary hosodoko, fanodinam-bolo, elektroforesis, fametahana chrome sns.
7. Fahaizana mivory
Minghe dia manome serivisy ho an'ny mpanjifa isan-karazany amin'ny fivorian'ny mekanika sy ny serivisy fanangonana. Manana traikefa be dia be amin'ny fanangonana fitaovana izahay, ao anatin'izany ny visy, ny visy, ny fehikibo, ny tsimatra, ny sisin-tsolika ary ny peratra O ary ny fitiliana tombo-kase mba hahazoana antoka fa miasa ny vokatra.
8. Rafitra fanaraha-maso kalitao
Minghe dia mandinika manokana ny fifehezana kalitao amin'ny fizotry ny famokarana betsaka ary nametraka fizotran'ny rafitra fanaraha-maso sy kalitao tanteraka. Fitaovana dimy matetika ampiasaina: PPAP, APQP, PFMEA, SPC, ary MSA. Ny vokatra rehetra dia dinihina tanteraka na namboarina mifanaraka amin'ny fenitra. Ny fitaovana fanandramana dia misy: spectrometer, milina fitsapana, CMM mandrindra telo, fandrefesana mandalo, refy mifanitsy, calipera isan-karazany, sns., Hahatratrarana ny fahaizan'ny fifehezana ny rafitra kalitao.
Masinina fanariana Die
Ny masinina milina Cnc anay
Ny fizotranay fonosana
Sary ho an'ny mpanjifa
Ny fisehoanay tsotra
Ny fisehoana famonoana ho faty
Casting maty aliminioma avo lenta, miaraka amin'ny fandeferana azo fehezina + -0.1mm.
Masinina fanariana maty vaovao, faritra maty fanariana firaka aliminioma dia azo fehezina tsy misy lavaka fasika, tsy misy marika rano, tsy misy bliting, tsy misy pitting, tsy misy harafesina, tsy misy oksidasiôna.
Ny hakitroky ny maty fanariana mitovy ny vokatra, ny vokatra dia tsy mora vaky, simba ary milamina ny kalitao.
Ny orinasa dia tsy mihidy 24 ora isan'andro, ny fotoana laninao sy ny kalitaonao no iraka ataontsika
Fitaovana fiara maty mandefa casting
Die Casting Valve Gas voajanahary
Fanakatonana fitaovana fiarovana amin'ny Die Casting
Fandroahana trano fonenana rivotra
Fonenana jiro fanipazana maty
Die Casting Fitaovana Motor
Zinc Die Casting firavaka
Fitaovana fanariana maty bebe kokoa
Fitaovana fanariana maty hafa ary vokatra vita amin'ny milina
Precision Die-Casting Aluminium Alloy Automotive varavarana tahony
Aluminium Die-Casting AP15 Electromagnetic Air Pump
Aluminium Die-Casting AP20 Air Pump Pump Sy ADC12 Electromagnetic Pump
Toeram-piarovana maotera avo lenta avo lenta
Anode Oxidation Die-casting Aluminum Alloy Parts Automotive kely